" ဟဲ့ပေါ်ဦး "
" ဘုရား "
" ခုတလော ခွေးတွေတယ်မြူးပါလားဟဲ့ "
" လက်ပံပွင့်ချိန်မို့ပါဘုရား " ။
" သူချည်းပဲလား "
" နေမြင့်လာတာလည်း ပါပါတယ်ဘုရား " ။
" ဟဲ့ပေါ်ဦး ၅၉(စ)လုံးထောက်ခံပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဆို "
" မှန်လှပါဘုရား "
" ထောက်ခံသူတွေရာကျော်တယ်ဆိုပဲ "
" အထင်ကြီးစရာမရှိပါဘုရား "
" ဘာကြောင့်လဲကွဲ. လျှောက်တင်စမ်း"
" ချေးဆိုတာ လူအတွက်ရွံစရာပေမယ့် ၊ ခွေးအတွက် နတ်သုဒ္ဓါလိုပါပဲဘုရား "
" သူချည်းပဲလားဟဲ့ "
" ချေးပုံမှာ ယင်အုံတတ်သေးတာလည်း သတိပြုပါ ဘုရား "
" ၅၉ (စ)လုံးမထောက်ခံရင် ဒီနိုင်ငံကထွက်သွားဆိုပါလား ပေါ်ဦးရဲ့ "
" အခုချိန်ထိ သူ့တို့ပထွေးပိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်
" သူချည်းပဲလားပေါ်ဦးရယ် "
" သူ့တို့အမေ လင်ငယ်ပိုင်တယ်လို့လည်း ထင်နေသေးကြောင်းပါဘုရား "
" ၅၉(စ)လုံး ထောက်ခံပွဲမှာ အမျိုးကောင်းသား/သမီးလေးတွေပါတယ်ဆိုသလား ပေါ်ဦးရဲ့"
"သူတို့ဘာသာတော့ ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုရား ၊ ဒါပေမယ့် "
" ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်တုန်းပေါ်ဦးရဲ့ "
" လူသာလာတာ ဦးနှောက်တွေပါမလာပါဘူးဘုရား "
" သောက်ရှက်တွေလည်း ပါလာတာမမြင်မိပါ ဘုရား"
" ဟဲ့ပေါ်ဦး ၅၉(စ)လုံးထောက်ခံသူတွေက အမျိုးချစ်တွေဆိုပဲ "
" ဒါဆိုဘာတုန်းပေါ်ဦးရဲ့ "
" တိုင်းပြည်ကိုအမြစ်ကနေချိုးဖို့ကြံနေသူတွေပါ ဘုရား "
" သူချည်းပဲလားကွယ် "
" မစားရတဲ့အမဲသဲနဲပက်ချင်တာလည်း ပါပါတယ်ဘုရား "
" ဟဲ့ပေါ်ဦး ဦးဆောင်သူက ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်ဆိုပဲ "
" သေခါနီး အရိုးတွန်တာပါဘုရား "
" သူချည်းပဲလားပေါ်ဦးရဲ့ "
" သေခါနီး ရိက္ခာယူတယ်ဆိုတာပါပါသေးတယ်ဘုရား "
" ဟဲ့ပေါ်ဦး အစိုးရမင်းများကရော ခွင့်ပြုသလားဟဲ့"
" ဒေဝဒတ်နဲ့ အဇာတသတ်လိုပါပဲဘုရား "
" ဟုတ်ရဲ့လားပေါ်ဦးရယ် "
" ဘုန်းကြီးရူးနဲ့လှေလူး မထူးဇာတ်ခင်းနေကြတာပါဘုရား "
" ဟဲ့ပေါ်ဦး ခုချိန်မှာဘာလို့ထလုပ်ကြတာလဲကွယ့် "
" ကြေးစည်ထုသံကြားရင် ခွေးဟောင်တတ်တာ
" ရှူးတိုက်ပေးရင်ပြေးကိုက်တတ်တာ အရှင်
" ထောက်ခံဖို့လာတဲ့သူတွေက အားတက်
" နေ့စားခ ၅ထောင်ပေးတာနည်းလို့ပါတဲ့ဘုရား "
" ဒန်ပေါက်ထုပ် မဝေလို့လည်းပါပါတယ်ဘုရား "
အိမ်း .....ဘယ်မျိုးချစ်ကကြားကဖြတ်ခုတ်သွားလဲမသိကွယ် ။
" ဟဲပေါ်ဦး နင်ရောထောက်ခံပွဲသွားသေးတယ်ဆို "
" မျောက်ပွဲပြမယ်မှတ်လို့ပါဘုရား "
" ကြည့်မကောင်းဘူးလားဟဲ့ "
" မျောက်ကအိုနေလို့ ပျင်းစရာကောင်းလှပါတယ်ဘုရား "
သမ္မတကြီး ရဲ့အချစ်တော် မျောက်
"ဟဲ့ပေါ်ဦး ငါ့တိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ဆိုးရွားသောင်းကျန်းနေတဲ့ လူငယ်လူရွယ်တွေကို မောင်မင်းပြောဆို ဆုံးမနိုင်တယ် ၊ အခု သက်ကြီးရွတ်တွတွေကိုရော
မောင်မင်း မဆုံးမနိုင်တော့ဘူးလားကွယ့် "
" မဖြစ်နိုင်ပါဘုရား "
" ဘာကြောင့်လဲကွယ့် ပေါ်ဦးရယ် "
" ခွေးအိုကြီးလက်ပေးသင်ရင်တတ်တယ်လို. အရှင်ဘုရားကြားလို.လားဘုရား "
" ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်တွေမို.ပါဘုရား "
" ဟဲ့ ပေါ်ဦး ပွဲကျင်းပတာကဘယ်မှာလဲဟဲ့ "
" ဗလောင်းဗလဲတွေ အဲ့ကွင်းမှာပြောနေတာ ဗိုလ်စိန်မှန်ကြီးက ဘာမှမပြောဘူးလားဟဲ့ "
" ဘာမှမပြောပါဘူးဘုရား ၊ တခုပဲ"
" ဘာတခုပဲလဲပေါ်ဦးရဲ့မြန်မြန်လျှောက်တင်စမ်း "
" ဗလောင်းဗလဲပြောတဲ့ပါးစပ်တွေ၊ နားထောင်တဲ့နားတွေ၊လာကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေ နှီးနဲ့ထထိုးမယ်လုပ်လို့ အကုန်ထွက်ပြေးလာရပါတယ်ဘုရား "
" ဘယ်လိုမျိုးထပြေးကြလဲဟဲ့ "
" ဖာတန်းမီးလောင်သလို ဝရုန်းသုန်းကားနဲ့ပါဘုရား "
" ဖာသည်မ ရဲလိုက်ခံရ သလို ကြောက်လည်းကြောက်ရပါတယ်ဘုရား "
အိမ်းကွယ်...ငါကိုယ်တော်လည်း အသွင်ယူခံရမှာတော့ကြောက်သကွယ် .....လွှတ်တော်ဒီမှာနားမယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/28/20160အကြံပြုခြင်း
Gong Xi Fa Cai ဆိုလို့ ရှန်ဟိုင်းရောက်နေတယ်မှတ်တာ
ဆိုင်ရာပိုင်ရာ ဖုန်းတွေဆက် အရေးယူခံနေရပုံ
လမ်းပိတ်ရပ်ထားလို့ ပိတ်နေတဲ့အထဲက ထိပ်ဆုံးက ပိတ်နေတဲ့ကားကို
စရှင်းရာမှာ ကားပိုင်ရှင်က တခြားကားဖမ်းပါလား သူ့ကားမှ ဖမ်းရသလား
ဆိုပြီး လက်ညိုးတငေါက်ငေါက်ထိုး မင်းမသွားနဲ့ ပြောပြီး၊ ၎င်းရဲ့ ရာထူး နာ
မည်တွေ မေး ဆိုင်ရာပိုင်ရာ ဖုန်းတွေဆက် အရေးယူခံနေရပုံပါ။
ရဲပေါက်စလေးမှာ အလုပ်ပျက်၊ လူတွေ ဝိုင်းကြည့် ရှက်၊ မျက်နှာငယ်။ ကား
တွေ ပိတ်ဆို့ လမ်းပိတ်ချက်၊ ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဝင်ပေါက်ရှေ့။
ငပိန်းတွေစုတာ ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းတစ်ကွင်းစာတောင် မပြည့်မှီ
မြန်မာအမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ဆိုသူများက ဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ဗိုလ်စိန်မှန်အားကစားကွင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ကြတဲ့ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ဆက်လက်တည်ရှိရေး ထောက်ခံဟောပြောပွဲရဲ့ အင်အားအခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ကျနော့်အတွက်တော့ ဝမ်းသာရတဲ့ခံစားမှု အကျိုးရလာဒ်ကောင်းတခုကို မျက်ဝါးထင်ထင် ထပ်မံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျား။
ဘာလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ မျက်ကန်းအမျိုးသားရေးဝါဒီ ငပိန်းတွေစုတာ ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းတစ်ကွင်းစာတောင် မပြည့်မှီတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်အတွက်၊ ကျနော်အလွန် ဝမ်းသာရပါတယ်ခင်ဗျား
" ဘကြီးရေ ၅၉ ထောက်ခံပွဲတွေလုပ်နေပြီဗျ၊ ပြင်ဖို့တော့ မလွယ်တော့ဘူး "
" ဟုတ်လား၊ ဘယ်သူတွေကလုပ်တာလဲ "
" NDFပါတီ က ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်ဗျာ၊ မတူကွဲပြားပါတီက ဦးနေမျိုးဝေဗျာ၊ မြန်မာ့အမျိုးသားရေးက ဦးဝင်းကိုကိုလတ်ဗျာ၊ ရှေ့နေကြီး ဦးအေးပိုင်ဗျာ၊ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေနော် ဘကြီး "
" ဟေ... ကြောက်တောင်လာပြီ၊ နေပါအုံးကွ.. မင်းပြောတဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေ ခေါင်းဆောင်တာဆိုတော့ လူဘယ်လောက်များများ တက်သတုန်း "
" သုံးရာတောင်ဗျ ဘကြီးရေ "
" လခွီး... ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာ လူသုံးရာတက်တာကို စကားထဲထည့်ပြောနေတယ်၊ ငါ့အိမ်က ထူးလုံနဲ့ မိဖီ ခွေးနှစ်ကောင် ပူးတုန်းကတောင် အဲဒီထက်လူစည်သေးတယ် "
" တိန် ... ဟုတ်လို့လားဘကြီးရယ် "
" ဟိုဘက်တောင် လွန်သေးတယ်၊ ခုနက မင်းပြောတော့ ပါတီ သုံးခုတောင်ပါတာနော် "
" ဟုတ်တယ်လေ ဘကြီးရဲ့၊ အာ့ကြောင့်ပြောတာ "
" ပိုဆိုးသွားပြီ ဟကောင်ရေ၊ သုံးဖွဲ့ပေါင်းပြီး လုပ်တာတောင် လူက ဒီလောက်ပဲလာတာဆိုတာနဲ့တင် အတော်ရှက်စရာကောင်းနေပြီ၊ ငါ့အိမ်ကခွေးတွေ ထွက်အူလိုက်ရင်တောင် ရွာနီးချုပ်စပ်ကခွေးတွေထွက်ပြီးလိုက်အူကြတာနဲ့တင် အကောင် သုံးရာကျော်သေးတယ်ဟ "
" ဘကြီး.. အာ့တော့ နဲနဲများသွားပြီ၊ ဘယ်လိုခွေးက အဲလောက်များမှာလဲဗျ "
" ဟ.. များတယ်ကွ၊ မသိပဲ လျှောက်ပြောပြန်ပြီ၊ အိမ်က မိဖီတောင် လင်သုံးလေးကောင်ရှိတယ်၊ တနှစ်တနှစ် မွေးလိုက်တဲ့ခွေးတွေ နည်းတာမဟုတ်ဘူး၊ ရွာနီးချုပ်စပ်က ဟာတွေပါထည့်ပေါင်းရင် အကောင်သုံးရာ အပျော့လေးပဲ "
" တော်ပါပြီ ဘကြီးရယ်၊ ဘကြီးပြောရတာ သိပ်မမိုက်ပါဘူး၊ ပြောလိုက်ရင် သူ့ခွေးတွေနဲ့ပဲ ကိုင်ပေါက်နေတာ "
" ဘကြီးမှာလည်း ဒီခွေးတွေနဲ့ပဲ ရန်ဖြစ်နေရတာဆိုတော့ ဒါပဲပြောစရာရှိတာကိုးကွ၊ သိပ်တော့ မထူးပါဘူးကွာ၊ မင်းလာပြောတဲ့ လူတွေအကြောင်းကလည်း ငါ့ခွေးတွေလောက်တောင် အကျိုးပြုတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့ခွေးတွေကမှ ခြံစောင့်ဖော် ရသေးတယ်၊ မင်းပြောတဲ့လူတွေက ဆန်ကုန်မြေလေးတွေ "
" တိန် "
ခွင့်ပြုမိန့် မှာ ပါတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် ပိုစတာပါ ရေးသား...
ငပိန်းတွေစုတာ ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းတစ်ကွင်းစာတောင် မြ...